Wardoonka Eritrea oo ka Laabtay Dhulka Somalida Ogadeeniya Gaadhayna Caasimada Eritrea – Rasaasa News
Apr 3, 2010 Eritrea, wardoon
Warar aanu ka helay sirdoonka Eritrea ayaa sheegaya in ay todobaadkan soo gaadheen Caasmara dad ka tirsan ciidanka wardoonka dalka Eritrea oo ka soo laabtay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Sida ay wararku sheegayaan, ciidamo aan badnayn oo ka tirsan ciidanka wardoonka Eritrea, ayaa waxay joogeen mudo badan dhulka Somalida Ogadeeniya, ciidamadan ayaa u qaybsanaa laba qaybood; qayb la socota ciidanka kooxda Jwxo-shiil ee duurka jooga iyo ciidan iyagu iyaga oo iska dhigaya shacab Itobiyan ah ka hawl gali jiray magaalooyinka dhulka Somalida Ogadeeniya.
Eritreanka oo ah dad Itobiyan oo aan dhaqan iyo af midna kaga gadisnayn qoomiyadaha dega dhulka sare ee Itobiya, ayey adag tahay in si dhib yar looga saaro dadka dhulka sare ee Itobiya. Gaar ahaan waxaan la fahmi karin kolka ay ka hawl galayaan magaalooyin ay degan yihiin dad Somali ah oo iyagu aan aqoon dhaqanka Itobiya.
Ciidanka wardoonka ee Eritrea ayaa iasgu isticmaala gabodho shaqaale ah iyo dadka masaakiinta ee muruqa isticmaala, wayna adkayd in dadka noocaas ah ay Somalidu u aragto wardoon. Arintaas ayaa mida kaliftay in qaxayo badan ay ka dhacaan magaalooyinka, dadka loo xidhxidhaana waxay ahaayeen Somali.
Dhinaca kale waxaa duurka ku jiray ciidan la socda kooxda Jwxo-shiil, oo samayn jiray qorsho walba oo lagu hawlgalyo.
Sida ay wararku sheegayaan wardoonkii duurka dhulka somalida ogadeeniya ayaa eritrea dib ugu laabtay, sababta keentay soo laabashadooda ayaa lagu sheegay in ay waayeen cid ay garabsadaan, ka dib kolkii ay dhamaan masuuliyiintii kooxda Jwxo-shiil, galeen dalka Kenya.
Warbixinta ay u keenen Eritrea ciidankeeda wardoonka ayaan isagu ka farxinayn xukuumada Eritrea, waxayna sheegeen ayna jirin Eritrea koox ay taageerto oo dagaal kula jirta Itobiya.
Sida ay warar hoose sheegayaan, waxaa loo yeedhay Ina-dhuubo oo xiligan wakiil uga ah kooxda Jwxo-shiil Eritrea, waxaana loo sheegay in ay deg deg u soo galaan Eritrea, afarta nin ee maamusha kooxda Jwxo-shiil, oo ah; Jwxo-shiil, Qaaxo, Ind-dhuubo iyo Abtidoon.
Lama sheegi karo in kooxdu ay ka jawaabi doonto dalabka ka yimid xukuumada Eritrea ee ah in ay in ay masuuliyiinta kooxdu timaado Eritrea. Isha ayeynu ku hayndoonaa sida ay wax noqdaan todobaadyada soo socda, iyada oo eegga uun uu Jwxo-shiil, arimo caafimaad u tagay South Afrika.